राष्ट्रिय हितमा अडिग रहन सके मात्रै आफ्ना मान्यता स्थापना गर्न सकिन्छ: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली – Janata Pati News Portal website, New Portal in Nepal, No 1 News Portal in nepal
Home > अन्तर्वार्ता > राष्ट्रिय हितमा अडिग रहन सके मात्रै आफ्ना मान्यता स्थापना गर्न सकिन्छ: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
राष्ट्रिय हितमा अडिग रहन सके मात्रै आफ्ना मान्यता स्थापना गर्न सकिन्छ: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
जनतापाटी २४ बैशाख २०७५, सोमबार १२:३६ May 7, 2018 अन्तर्वार्ता	0
कूटनीतिमा एउटा भनाइ छ– ‘जे देखिन्छ त्यो हुँदैन र जे देखिँदैन त्यही हुन्छ’, नाकाबन्दीका क्रममा भारतसँग अडान लिने ठानिएका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली वामगठवन्धनबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री हुँदै सत्ताको दोस्रो पारी खेल्दै छन् । महाकाली सम्झौतामा बिवादित आफ्नो पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीभएपछि ओलीले ‘राष्ट्रवाद’ को जगमा पखालेका थिए । नेपालमा भारत निकट र भारतमा चीन निकट भनेर कहलिएका ओलीका लागि प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल कुटनीतिक सन्तुलनका हिसावले चुनौतिपूर्ण नै देखिन्छ । यसैबीच भर्खरै उनले भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे । भ्रमण सकेर विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ ओलीले भने–‘यो भ्रमण यथार्थमै उपलब्धिमूलक रह्यो’ । त्यसो त आफ्नो भ्रमणलाई सफल बताउने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि भ्रमणदलमा थिए । एमाले सचिवसमेत रहेका ज्ञवालीसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको भारत भ्रमणका विषयमा केन्द्रीत रहेर नरेश ज्ञवालीले डिस्कभरी न्युज नेटवर्कका लागि लिएको अन्तर्वाताको सम्पादित अंश।
प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभासद्को पहिचान गराउने लोगो सार्वजनिक
के शुल्क नलिँदैमा शिक्षा निःशुल्क हुन्छ ?
अर्को जनआन्दोलन नगरेसम्म पहिचानको समस्या समाधान हुँदै हुँदैन : डा. ओम गुरुङ